Waaligii Wilaayada Islaamiga Kabisa Oo Shihiiday. – Calamada.com
Waaligii Wilaayada Islaamiga Kabisa Oo Shihiiday.
calamada July 24, 2018 2 min read
Wararka ka imaanayo Wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in weerar diyaaradaha dagaalka Saliibiyiinta ay ka fuliyeen Gobolka Kabisa oo dhaca Waqooyi Bari wadankaasi uu ku shahiiday Waaligii Imaarada Islaamiga ah ee gobolka Kabiisa iyo 3 Mujaahid oo kale.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Mulla Maxamed Nasiim Mushfiq oo ahaa waaliga Wilaayada Islaamiga Kabiisa uu ku shahiiday duqeyntan oo dhacday Shalay gelinkii dambe, xilli uu kusugna Degmada TAAJAAB oo hoos timaada gobolka Kabisa.
Saddex-da walaal ee la shahiiday waaliga ayaa lagusoo waramayaa inuu ku jiro Waaligii degmada TAAJAAB, duqeyntana ay dhacday xilli ay kuwada sugnaayeen qeybo kamid ah degmada.
Warbaahinta Cadowga ayaa sheegtay In waaliga xilliga la beegsanayay uu ku sugnaa mid ka mid ah furimaha dagaalka, isagoo soo indha indhaynayey sida uu ku socdo duulaanka loogu magac daray Al Khandaq ee Imaarada Islaamiga ah ay kaga dhawaaqday dhamaan gobolada wadanka Afghanistaan Afar Bilood ka hor.
Bayaan tacsi ah oo ay soo saartay Imaarada Islaamiga ah ayaa lagu xaqiijiyey istish-haadka Waaliga gobolka Kabisa Mulla Maxamed Nasiim Musfiq iyo Waaligii degmada Taajaab Qaari Ixsaanulaahi Cusmaan iyo Lab Mujaahid oo kale oo la socday.
Bayaanka Imaarada ayaa lagu yiri, in lagu bixiyo nafta wadada alle oo shahaado aan gaarno waa waxa ay rajeynayaan ciidanka Imaarada yar iyo waynba, istish-haadka Walaaleheenna waxaan u aragnaa Nasri iyo cizzi, waana mid na farxad galineysa inuu allah subxaanah oofsaday iyagoo ku taagan dariiqa xaqqa ah oo aan ka leexan.
Mujaahidiinta Dhaalibaan ayaa taczi u diray, qoyska ay ka shahiideen Afarta Mujaahid, walaalahooda mujaahidiinta ah iyo ragii ay ka garab shaqeynayeen oo ay isku khandaqa ahaayeen, kana soo wada halgameen Saaxaadka jihaadka, waxa ayna Allaah uga baryeen inuu raxmadiisa u waasiciyo sabarna uu ugu deeqo ehaladooda.
Waaligan ayaa noqonaya waaligii Saddex-aad oo kashahiida Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan Labadii Sano ee lasoo dhaafay, waxaana horey diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay u duqeeyeen Waaligi Wilaayada Qunduz Sheikh Mulla Cabdi Salaan iyo Waaligi Wilaayada Baglaan sheikh Mowlawi Lacala Maxamed, kuwaas oo ku shahiiday duqeynSaliibiyiinta ay ka geysteen qeybo ka mid ah wadanka Afghanstan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 11-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 11-11-1439 Hijri.